Blacksmithing - WoW Guides | WoW Guides
Omano ny anvil sy marmela mba hananganana ny fiadiana mahery, fitaovam-piadiana ary ampinga lehibe indrindra eran'i Azeroth, na amin'ny mailaka na amin'ny lovia.
Zandalari sy Kul tiras Blacksmithing Guide - 1 ka hatramin'ny 150
Aloha! Amin'ity torolàlana ho an'ny Blacksmithing Zandalari sy Kul tiras ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 150 dia hampianarinay anao ny handeha amin'ny làlana ...
Salama daholo. Androany aho mitondra aminao ny vaovao sasany momba ny asan'ny Blacksmithing amin'ny Battle for Azeroth. Rehetra…
Torolàlana an'ny mpanefy 1-800
Aloha! Amin'ity Blacksmithing Guide ity manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 800 dia hampianarinay anao ny fomba fivezivezena amin'ny fomba mora sy haingana indrindra ...
Torolàlana momba ny Blacksmithing ao Legion - Raiso ny fomba fahandro rehetra
Tsara! Amin'ity torolàlana mpandrafitra vy ao Legion ity dia asehonay anao ny vaovao rehetra momba an'ity asa ity sy ny fomba hahazoana ny rehetra ...
Misiona mpanao vanja ao Legion
Tsara! Amin'ity toro-lalana ity dia mizaha ny antsipiriany momba ireo iraka mpanefy vy ao Legion rehetra. Ny famitana ity rojo ity 100% dia hahatratra ny ...
Draenor Smithing Guide 1-700 Nohavaozina 6.2
Tongasoa eto amin'ny torolàlana Warlords of Draenor Blacksmithing izay hanampianay anao hahatratra ny ambaratonga 700, ary koa ...
Torolàlana an'ny mpanefy 1-600
Ity torolàlana ity dia hampianatra anao ny fomba haingana sy mora indrindra hahazoana ny Smithy anao amin'ny 1 ka hatramin'ny 600. Nohavaozina ho an'ny patch 5.0.5. Ny Blacksmithing dia tsara indrindra ampiarahina amin'ny Mining ary tena ilaina ny mampakatra ny Mining sy ny Blacksmithing amin'ny fotoana iray satria mila volamena be dia be ianao raha te hividy ny zava-drehetra avy amin'ny Auction.
Mila fanoloran-tena be vao tonga any amin'ny faran'ny an'ireto epic ireto. Toy izany koa, toy ny fivarotana zavatra noforonina hafa, manomboka ho hita ny tombony amin'ny farany, ka amin'ny fananganana ny Mpanefy vy dia mila manangona volamena be dia be ianao hahita ny valiny amin'ny farany.
Torolàlana an'ny mpanefy 1-525
Niverina ny Deathwing ary niova ny zava-drehetra. Betsaka ny zava-baovao ... Nefa eto izahay mitondra torolàlana momba ny fomba fampidinana ny Professional Blacksmith amin'ny fomba haingana indrindra amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny 525.
Blacksmithing dia asa mazàna amin'ny kilasy mampiasa Badges na dia tsy voatery hatao aza izany. Ny mpanefy vy dia manamboatra fitaovana tsara, ary mandritra ny votoatin'ny Content Patches dia mahazo hoditra vaovao mifanaraka amin'ny haavon'ny fitaovana vaovao izy ireo.
Ity asa ity, toa firavaka e injeniera, mifameno tsara amin'ny fitrandrahana.
Miomàna hatsembohana amin'ny forge satria handany fotoana be ianao eo amin'ny fanaovana tapa-fitaovana izay hotafihin'ireo mpilalao rehetra.
Torolàlana an'ny Blacksmith 450-525
Ny tanjon'ity torolàlana ity dia ny hampiseho aminao ny fomba mora indrindra hiakaranao Mpanefy vy amin'ny ambaratonga 450 ka hatramin'ny 525. Angamba mbola tsy nampakatra ianao Smithy hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 450, aza adino ny mitsidika ny anay Torolàlana an'ny mpanefy hahatratra ny haavon'ny max alohan'ny hanombohan'ny Cataclysm. Ho an'ity dia tsy hampiasa afa-tsy amin'ny alàlan'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany na ividianan'ny mpivarotra izahay. Niezaka ny hampiasa fitaovana vitsivitsy araka izay tratra izahay.
Avy amin'ny haavo 425 an'ny Blacksmithing dia afaka miakatra amin'ny famokarana isika Obsidium aforeto izay hampiasainay amin'ny asa sisa.
Torolàlana an'ny mpanefy 1-450
Miaraka amin'ny torolàlana ho tonga mpanefy vy, ho hitanao ny fomba haingana indrindra hampiakarana ny haavon'ny Blacksmith anao manomboka amin'ny haavo 1 ka hatramin'ny haavo 450 mandany fitaovana kely araka izay tratra.
Blacksmithing dia asa iray izay efa nanambady mazava fitrandrahana (aza adino ny Torolàlana momba ny harena ankibon'ny tany miakatra an'io asa io na mitady ny toerana tsara indrindra hambolena ireo fitaovana), ka raha mpitrandraka ianao dia tsy dia handany asa firy hahazoana ireo fitaovana ireo. Na izany aza dia azonao atao foana ny mahazo azy ireo ao amin'ny trano varotra.